Biyo - Wikipedia
17 Jan 2005 - 13 Jun 2019
Biyo. Sadexda xaaladood Adke, Dareere iyo Hawo.
Biyaha (Af-Carabi: ماء Af-Taliyaani: acqua Af-Ingiriis: water Amxaari: ውሃ) waa isku dhis dareere kiimikaad oo ka samaysan Haydarojiin iyo Ogsajiin. Biyaha meelo badan oo meereha aan ku nool nahay ee dhulka ayaa laga helaa taas oo aas'aas u ah nolosha nooleha ku nool Adduunka.
Inta badan Biyaha waxaa la isticmaalaa iyagoo xaalad dareere ah, mar marka qaarkoodana iyagoo ah xaalad adke ah sida barafka, iyo iyagoo ah hawo sida uumi. Biyaha Dhulka korkiisa wuxuu daboolaaa 71%.
1 Qaacidada Kiimikaad ee Biyaha
2 Silsilada Biyaha
3 Biyaha iyo Diinta Islaamka
4 Qeybaha Biyaha
5 Nolosha & Biyaha
6 Ilaha Biyaha
Qaacidada Kiimikaad ee Biyaha[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
Biyaha qaacidadiisa Kiimikaad waa H2O (labo Haydarojiin iyo hal Ogsajiin). Kimisteri ahaan qaacidadaas waxa loo qoraa:
Hal Malakuyuul ama labo atom Haydarojiin + Hal atom Ogsajiin = HaydarojiinOgsaydh Biyo.
Haydarojiinta iyo Ogsajiintu waxay wadaagayaan "electrons" kuwasoo sameeya Isku-xidh ("bond") u dhaxeeya Haydarojiinka iyo Ogsajiinta.
Silsilada Biyaha[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
biyuhu ku wareegaan sadex marxaladood. Kuwaas oo kala ah: Adke, Dareere iyo Hawo.Isdaba wareegaas waxaa loo yaqaanaa Silsilada Biyaha.
Inta la ogyahay, Biyuhu waxay ka mid yihiin aas'aaska nolosh kuwaas oo nooleha dhamaantiis u baahan yahay.
Dhinaca kale, biyuhu ku wareegaan sadex marxaladood. Kuwaas oo kala ah: Adke, Dareere iyo Hawo. Isdaba wareegaas waxaa loo yaqaanaa Silsilada Biyaha (ciclo dell'acqua, water cycle, دورة مائية).
Adke: marka heerkulku gaadho −0 °C iyo wixii ka hooseeya biyuhu aad ayay u qaboobaan, taas oo ka dhigta baraf adke ah.
Dareere: marka heerkulku u dhexeeyo −0 °C ilaa 99 °C biyuhu waa dareere.
Hawo: laakiin heerkulku markuu gaadho 100 °C biyuhu waxay isku badalaan uumi kaas oo hawoda gala kuna qabooba halkaas. Ka dib daruuro noqda dibna ugu soo da'a dhulka asagoo roob ah - dareere.
Sidaas ayay biyuhu isku-daba wareegaan.
Biyaha iyo Diinta Islaamka[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
Biyaha Diinta Islaamka waxey siisay muhiimad weyn isagoona ah Aas'aaska Nolosha, iyadoo Qur'aanka Kariimka magaca Biyo lagu sheegay 34 Aayadood.
Iyadoona uu Alle kor ahaaye yiri : "و جعلنا من الماء كل شيء حي"، biyaha waxaa loo isticmaalo is daahirin , weysoqaadshada Salaada Iyo dhaqida meydka intaan la aasin,
Qeybaha Biyaha[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
Guud ahaan biyuhu waxay u kala baxaan labo qeeybood kuwaas oo kala ah biyoha macaan iyo biyoha dhanaan.
Biyaha macaan waxa ka mid ah Roobka, biyaha ceelasha IWM. Biyaha dhanaan waa biyaha baddaha, sida Badweynta Hindiya IWM.
Ayadoo la tixraacayo Koloriinta iyo Aaydhiinta ku jirta biyaha macaan ayaa loo kala saari karaa biyo adag iyo biyo khafiif ah.
Nolosha & Biyaha[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
Ilaha Biyaha[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
Dhulka dushiisa, 96.5% biyaha dunida waxa laga helaa badaha, halka 1.7% eey dhulka hoostiisa ku jirto, iyo 1.7% kale baraf tahay. Intaas waxaa soo raaca tiro yar oo laga helo oogada dhulka sida harooyinka, wabiyada IWM. Tiro dhan 0.001% oo biyo ah ayaa cirka ku jira kuwaas oo uumi ah ama daruuro.
Dhinaca kale, qiyaas dhan 2.5% ayaa biyo macaan ah, 97.5% ka kale waa dhanaan.
Ilaha ugu muhiimsan ee biyaha waxaa ka mid ah roobka, ceelasha, wabiyada, harooyinka iyo meelaha qaar oo sifeeya biyaha badda.
Maqaalkaan waa la bilaabay.hadii aad wax ka taqaanid waa ku caawin kartaa Wikipedia in aad Wax ku dartid.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Biyo&oldid=142413"
Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay 12:56, 28 May 2015.